MPANAFAKA TAHAKA AZY – filazantsaramada
MPANAFAKA TAHAKA AZY
Publié parfilazantsaramada	 novembre 28, 2014 Laisser un commentaire sur MPANAFAKA TAHAKA AZY
«Dia natolotra Azy ny bokin’Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe: « Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah » (Isa. 61. 1, 2).» (Lioka 4:17-18-19)
Iraka ho an’i Jesosy Kristy ny fanafahana ahy sy ianao. Ary, maro ireo toe-javatra anafahana antsika, satria mampijaly loatra. Tanisaina eo ambony izany, ary ireo rehetra ireo koa no anjara fanompoana ifidianana antsika ho eo amin’ny tanimboaloboky ny Tompo. Raha mandinika tsotra izay ambaran’ny Soratra Masina eto isika, dia mahatsikaritra avy hatrany fa isika mihintsy no iantefàn’ny resaka, dia isika izay efa nofidin’Andriamanitra hitory ny fitiavany amin’ny olona rehetra izany. Misongadina tanteraka araka izany ireo toetran’i Jesosy tokony ho ananantsika eo am-panatanterahana ny asa sy ny hoe: Inona marina no asan’Andriamanitra miandry antsika?
Efa fanaon’i Jesosy mihintsy ny mandray anjara mamaky ny tenin’Andriamanitra eo amin’ny synagoga amin’ny andro sabata. Amin’izao ahitàntsika azy izao dia ao amin’ny tanàna nahabe azy, dia Nazareta izany, no anehoany ny fitiavan’Andriamanitra ny olona izay tanterahin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny tenan’Izy Jesosy Kristy. Entin’ny herin’ny Fanahy Jesosy tamin’izay rehetra nalehany sy nataony; araka ny hita eo amin’ny andininy faha 14. Manambara izany fa tsy mandeha irery Izy. Asehony fa Izy sy ny Fanahy dia tsy misaraka na oviana na oviana; Indrindra moa fa ny Ray izay ao aminy. Dia ilay Andriamanitra manana teny soa miteraka fifaliana ho antsika. Teny manafaka ny fatorantsika, dia ny herin’ny maizina izay mampitondra faisana ho amin’ny fiainantsika izany. Raha ny ara-nofo, dia tsy firy amintsika ankehitriny; na dia mahiratra aza ny masontsika no tsy mahita olona intsony eny an-dalana noho ny fanambonian-tenantsika sy ny fizahozahoantsika ary ny fireharehantsika. Toa jamba! Tsy mahita olona intsony ihany koa isika na dia efa mila hifandona aza noho ny adin-tsaina lalina mianjady amintsika, satria mafy ny fiainana, betsaka koa ny olana vahàna isan’andro miiratra. Mainka moa, jamba ny fanahy noho ny tsy fananana fotoana ilomanosana amin’ny tenin’Andriamanitra intsony. Aoka ho tsaroantsika mandrakariva anefa fa manafaka amin’ny fahoriana io tenin’Andriamanitra rentsika isanandro io. Na inona na inona endriky ny fahoriantsika, ao amin’io tenin’Andriamanitra io no misy ny vahaolana haingana indrindra. Inona moa no tena ankasitrahan’i Jehovah amintsika afa-tsy ny fibebahana sy ny fiverenantsika aminy! Isika, ilay efa nania sy nanalavitra azy noho ny fahotantsika! Rehefa tafaverina soamantsara tamin’Andriamanitra isika noho ny rà soan’i Jesosy Kristy Mpamonjy, dia tokony hijoro vavolombelona sy hizara izany amin’ny malahelo sy ny voafatotry satana ary ny jamba sy ny ory; dia ireo lavitry ny famonjen’ny Kristy. Aoka ho MPANAFAKA TAHAKA AZY isika.
Ry havana, na dia heverinao aza fa zonao ny fananana fahaleovantena amin’ny asa fitoriana ataonao, satria efa voafidy ny ho amin’izany ianao; tsarovy izay nataon’i Jesosy. Angataho ny herin’ny Fanahy Masina hitari-dalana ny hampianatra ary hampahery anao. Tsarovy fa manana adidy lehibe ihany koa ianao «hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo; hitory fandefasana amin’ny mpifatotra, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah» Amin’izay ataonao dia hevero mandrakariva ny tenin’i Jesosy hoe: «Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona.» (Jaona 15:5). Ho aminao ny fiadanan’ny Tompo. Amen!
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena …ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Publié parfilazantsaramada novembre 28, 2014 Publié dansUncategorized
TSY MAINTSY IANJADIAM-PAHORIANA NY FIAINAN’NY MINO
Voafonja vehivavy (Antanimora): Fifaninanana Rindran-kira ara-pilazantsara